မိမိနှင့် WLC Battlebones အပိုင်း(၄) အဆုံးသတ် -
မိမိနှင့် WLC Battlebones အပိုင်း(၄) အဆုံးသတ်
Posted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 15, 2020 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2020 by Editor Min Oakar
မိမိနှင့် WLC Battlebones အပိုင်း(၄)
အမျိုးသား​တွေအများစုရဲ့တိုက်ခိုက်​ရေး​ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်​ရေးပွဲစဉ်တွေကို ဖျတ်ကနဲ ကြည့်ရမြင်ရတာကလည်း ​ခံစားတက်ရင် အရမ်းကြွတဲ့ နတ်ဒိုးသံစဉ်တပုဒ်ကို နားဆင်မြင်ရသလိုပါပဲ။ ​ဆောရစ်မန်ဖရက်ဒီရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်​မြောက်မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်။ သူမ​ပျော်​နေတဲ့ ခံစားချက်နဲ့မျက်နှာက media day ​နေ့တည်းက ဖုံးမရဖိမရ။ WLC ကထပ်​ပေးတဲ့ ဒီအခွင့်အ​ရေးက အသုံးချတက်ရင် သူမအတွက် ​ရွှေပဲ​လေ။ ထရန်သီလူအာက​တော့ တိုက်ခိုက်ရေးသမလို့ မထင်ရအောင် သိပ်နုလှလွန်းတဲ့ မျက်နှာ​လေးနဲ့ လက်​ဝှေ့ထိုးမှာလားကွာ လို့ မိမိကကြားက​နေ နှ​မျော​နေမိ (မင်းသမီးအထိဖြစ်လို့ရတဲ့ မျက်နှနုနု​လေးရယ်ပါ) လက်ဝှေ့မယ်ဇာတ်လမ်းမှာ ကိုယ်ပါ တခါတည်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သွားတယ်။ အတွေးက မြန်ချက် ထိန်းမရချင်ဘူး။ ​​ဆောရစ်က သိမ်ဖြူရုံကို သိပ်သ​ဘောကျ​​ကြောင်း တဖွဖွ​ပြေ​​နေ​လေရဲ့။ ပရိသတ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ထိထိ​တွေ့​တွေ့ ​​နွေး​နွေး​ထွေး​ထွေးရှိတယ်လို့ ခံစားရ​နေလို့ဆိုပဲ။ ထရန်သီက​တော့ စကားနည်းပြီး အလုပ်နဲ့ပိုသက်​သေပြချင်တယ်ပုံ။ ပွဲရလဒ်က​တော့ ပရိသတ်အများစုထင်ကြမြင်ကြသလို ​ဆောရစ်အလဲထိုးအနိုင်ပါ။ လွယ်လွယ်​လေးပွဲသိမ်းသွားတယ်လို့ ထင်ရင်​တော့မှားမယ်​​ပေါ့ မိတ်​ဆွေ။ ပွဲပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်း​ထောက်တစ်​ယောက်က ​မေးလိုက်ပါတယ် ​” ​ဆောရစ် ခုလိုအ​စောကြီးပွဲသိမ်းနိုင်လို့ ခံစားချက်​လေး​ပြောပြပါဦးဆို​တော့”
“ ဘုရား​ရေ အ​စောကြီးပွဲသိမ်းတယ်တဲ့လား ကျွန်မရဲ့ဘယ်ဘက် မျက်လုံးကိုလည်း ရှင်တို့ကြည့်ကြပါဦး ” ဟုတ်ပါတယ် ​ဆောရစ်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက ဖူး​ယောင်ကိုင်းပြီး ညိုမဲစွဲ​နေတာပါ။ အသက်အရွယ် အ​တွေ့အကြုံ ခွန်အား ကွာဟလွန်းတာ​ကြောင့် လက်နက်ချလိုက်ရ​ပေမယ့် ထရန်သီရဲ့ ​ဘောက်ဆင်ဆန်တယ့် အ​​​ရွေ့​တွေနှင့် ဘယ်ညာလက်သီးတွဲလုံး​တွေက ​ဆောရစ်ထက်​တောင် သာလွန်သလိုရှိခဲ့တာပါ။ အားသာချက်ကိုယ်စီကို ပြိုင်တူထုတ်ပြခဲ့ကြပြီး အနိုင်နဲ့ထိုက်တန်အောင် လုပ်ပြနိုင်သူက နိုင်ခဲ့တဲ့ ရှင်းလင်းလှပသော ကျေနပ်စရာ အမျိုးသမီးပွဲစဉ်တခုပါ။ ကျေးဇူးပါ WLC.
နန်းသိမ်းပွဲရဲ့ဘုရင် ဘယ်သူလဲ သို့မဟုတ် ချန်ပီယံကဘယ်သူလဲ​ပေါ့။ အ​ဖြေက​တော့…. ဘုရင်ဖြစ်ခွင့်ရသူက တူတာဗို့ပါ။ ထိုက်တန်တယ် အငြင်းပွားစရာမရှိခဲ့ဘူး။ ပရိသတ်လည်းလက်ခံခဲ့ရတဲ့ တိုက်ရေးခိုက်ရေးနှင့် ထပ်တူကျခဲ့တဲ့ ရလာဒ်။ ဒီလိုရလာဒ် ထွက်လာဖို့ အ​ကြောင်းတရား​တွေက တစ်ဖက်မှာ သိသိသာသာ သွားစုပြီဆိုတည်းက ဒီပွဲရဲ့ ​အောင်နိုင်သူဟာ အငြင်းပွားစရာမရှိ WLC ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရပါပြီ။ တူတာဗို့က ဒီအခွင့်အ​ရေးနဲ့​နေရာကို အကြွင်းမရှိ သိမ်းပိုက်ရင်း နန်းသိမ်းလိုက်ပါပြီ။
ဖိအားဆိုတာ အသုံးမချတက်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျာဖြစ်ကုန်ကြပြီး ​ကြောက်စရာ​ကောင်း​အောင်နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ ​မောင်တူးအရမ်းကြိုးစားခဲ့​ပေမယ့် ဖိအား​​ကြောင့် ​မောင်တူးဟာ ​​မောင်တူးမဖြစ်ခဲ့။ ဒီဖိအားကလည်း သူ့ပရိသတ်အပေါ် ချန်ပီယံကိုသာအမြဲအား​ပေးခွင့်ရတဲ့ ပရိသတ်သာဖြစ်​စေချင်တဲ့ ​မောင်တူးရဲ့​စေတနာအဖြူသက်သက်ပါ။ တူတာဗို့ရဲ့ ကစား​ပေါက်ကို အလွတ်ရ​နေလျက်သားနဲ့ အ​လောကြီးမိတဲ့ စိတ်​ဇောက မြစ်ဖျားစခံရတာပါ။ တိုက်စစ်ဝင်တိုင်း ဂတ်ကြီးဖွင့်ပြီး ပေးလိုက်ရတဲ့ အမှတ်​တွေကို နှ​မြောမိတယ်။ ​အောက်​ဒေါင့်ရှင်းကို ဘာလို့​လေးချီမှစလည်း စဉ်စားမရဘူး။ ကြိုးတန်းနား​ရောက်တိုင်း ရင်ဖွင့်မဝင်ပဲ ​ခေါင်းငုံ့လျက်ဖြစ်​နေတဲ့အ​နေအထားကို အားမရဘူး။ ဘယ်​ထောက်ညာဝိုက်ပြီးရင် သတ်ကွက်ကုန်တဲ့ တူတာဗို့ကို ဘာလို့​ခေါင်းယှဉ်မတိုက်သလဲ(သူက​တောင်တစ်ကြိမ်ပြန်တိုက်သွားခဲ့) စဉ်းစားမရဘူး။ လက်ပြန်ရိုက်ချက်ထိသွားမှာကိုပဲ အာရုံ​ရောက်​နေတယ်လို့ ထင်ပါရစေတော့ တူးတူးရယ်။ တူတာဗို့​ကောင်းလို့ဆိုတာထက် ​မောင်တူးဘက်က လိုအပ်တာ​တွေသိပ်များသွားလို့ အမှတ်တွေပေးလိုက်၇တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ရဲရဲကြီးထင်​နေတုန်း။ နှစ်ချီကစလို့ ဖိုထို​းနေတဲ့ သက်လုံကို​တော့ အားမရဆုံးပါ။ အမှတ်​ပေးပွဲက လာတဲ့သူမို့ အမှတ်ရ​အောင်ထိုးဖို့ တူတာဗို့အတွက် သိပ်မခက်။ ခက်​နေတာက ကိုယ်​တွေရိုးရာလက်​ဝှေ့ကမ္ဘာပါ။ အလဲမထိုးနိုင်မှန်း ကိုယ့်​ထောင့်ကအကူ​လူတွေနဲ့ပရိသတ်က ရိပ်စားမိပြီ။ အမှတ်ယူပြီး အ​လေးသာ​​အောင်ထိုးဖို့ကျ ကစားသမား နည်းပြ အား​ပေးသူပရိသတ်အတွက် သိပ်ခက်​နေပြန်​ရော်။ ဒါကလည်း ​​တော်လှန်​ရေးကာလ စနစ်အကူးအ​ပြောင်းမှာ စ​တေးလိုက်ရတဲ့ #အဖိုးတန်မာနတရား​တွေ​ပေါ့ ။ ထားပါ နည်းပညာ​ခေတ်ကြီးကို အမီလိုက်ချင်သပဆို ကိုယ့်နံရိုးလည်းတံတားထိုးသင့်ထိုးရမှာပဲ​လေ။ ​​နှောင်းလူ​တွေအတွက် လမ်း​ဖော်ပြီးသား​ပေါ့​နော်။ ဂုဏ်ယူတက်ရင် ​ကျေနပ်စရာပါ။ ငါးချီလုံးက ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအတိနဲ့ ပါဝါနှင့်ပညာခန်းပြိုင်သွားကြတာပါ။​ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ကြိုးဝိုင်းအဖြူထောင့်မှာ ရေးထားထဲ့ စပွန်ဆာကုမ္ပဏီရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်လို့ထင်ပါတယ်။ Speed ဗမာလို အမြန်နှုန်း။ လက်သီးယှဉ်ထွက်တိုင်း သူ့လက်သီးကိုယ့်ဆီအရင်ရောက်လာတာမျိုး။ ဘောင်းဘီ​လေးမ မျက်ခုံး​လေးပင့် ပြုံးပြပြီး” လာ​လေကွာ ​​​ဟေ့​ရောင်တူတာဗို့ဆိုတဲ့” ​မောင်တူးရဲ့ ချန်ပီယံမာန်ကို​တော့ အ​လေးမပြုဘဲမ​နေနိုင်​ပေါင်။ အ​ကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ​မောင်တူးရဲ့မြန်မာပရိသတ်​တွေ မ​ပျော်ခဲ့ရ​ပေမယ့် WLC က ထပ်​ပေးလာ့မယ့် မ​ကျေပွဲကို​တော့ ကျ​နော်တို့ကလည်း ရင်​ကော့ပြီးမျှော်နေဖို့ ဘာလို့ မရဲရမှာလဲ
Posted in ဆောင်းပါး, ဆွေးနွေးခန်း, လက်ဝှေ့သမားများ, လက်ဝှေ့ပွဲညွှန်း
နောင်လုံဖျံရဲ့ တချိန်က ကျော်ကြားခဲ့သော အောက်ဒေါက်ရိုက်ချက် ထိုးကွက်များ
ဒလဒီပရိုးရာလက်ဝှေ့ကလပ်သစ် တစ်ခုရဲ့ နိဒါန်း